Isiphetho esihle phakathi kwemayini nesishabasheki – Ubukhosi
Home/ Iphupho le-Afrika/Isiphetho esihle phakathi kwemayini nesishabasheki
UMnu uSandile Ntuli
Baqala beyinkukhu nempaka kepha manje sebengabalingani ngokwebhizinisi kanti nomphakathi uyazuza
INSIZWA yasoLundi, oKhukho isiphenduke isibonelo esihle entsheni yendawo kanye neyesifundazwe ngenxa yokuba usomabhizinisi osephumelele kodwa engawulahlile umphakathi esuka kuwo. Lona nguMnu uSandile Ntuli oneminyaka engama-35 ubudala, wenkampani iBayakha. Lensizwa iyaziwa endaweni njengomunye owabe eyisishabasheki samalungelo abantu bendawo ababenesikhalo sokuthi ingcebo ephambi kwabo okuyimayini yasoKhukho, iZululand Anthracite Colliery (Zac) ayiwusebenzeli ngalutho umphakathi. Wayeyingxenye yamalungu omphakathi owawufuna lemayini ibonelele abantu bendawo ngamathuba kakhulukazi intsha. Intukuthelo kaNtuli nabalingane bakhe yayenza babe nomnqamulajuqu wokuthi “lemayini ngoba ayiwusizi ngalutho umphakathi kumele ivalwe”.
Konke lokhu sekungumlando njengoba namuhla uNtuli usengusomabhizinisi ohlonishwayo ngakubo njengoba inkampani yakhe iBayakha isingabalingani nemayini. Lokhu sekwenze umfokaNtuli wakwazi ukuhweba ngamatruck amakhulu angama-51. Echaza ngohambo lwakhe uNtuli uthe: “Ngike ngafunda eNyuvesi iminyaka emithathu kodwa angizange ngiqede ngenxa yokuthi ekhaya bebengasenayo imali yokungiqhuba. Ngabona ukuthi kungcono ngicabange ngisabalale ngokomqondo ukuze ngithole amasu azongisa phambili esikhundleni sokusonga izandla ngilinde ukuphiwa. Ngabe sengiza emayini eZac noma uKhukho ngazocela umsebenzi. Kuthe sengiwutholile ngacabanga ukuqala ibhizinisi nokuyilapho engabe senginxenxa khona iZac ukuba ingixhase ngezimali. Kwabesekulandela ngokuthi ibhange iThala nalo lisixhase enkampanini esabe siyiqalile njengoba namhlanje sesikhule sadlondlobala sakwazi nokuba namatruck angama-51. Ngabe sengithatha abesifazane benani elithile ngabaqeqeshela ukushayela nokuthi bakwazi ukusisiza enkampanini, bashayele amatruck,” kusho uNtuli.
Uqhube wathi ukubalapho bekhona akuzange kubelula ngoba kunamatruck abalahlekela engiqwa yilamantombazane ababewafundisile. Nokho uthi nakuba kunjalo kodwa abafikanga esinqumeni sokuba lamantombazane bawaxoshe ngoba bayakholelwa ekutheni wonke umuntu ufunda ngamaphutha. UNtuli ubuye adalule ukuthi banqume ukuba basize intsha esezikoleni ezakhele izigodi zangakubo ngomfaniswano wesikole nangokuyikhokhela zonke izindleko kuze kuyofika ezikhungweni zeMfundo ephakeme.
“Siyakugqugquzela ukuba uma umuntu esephumelele angavele elokhu egxisha abantu ngotshwala kodwa akenze umehluko omuhle ezimpilweni zabo. Mina ngizimisele ukuthi umphakathi wangakithi ngiwakhele isikhungo somtapowolwazi hhayi ijoyinti. Okunye ukuthi nemindeni yezingane ezisuke zibonelelwa ngemifaniswano nokunye kodwa kuphinde kubenesiqiniseko sokuthi nemindeni yazo ilala idlile,” kusho uNtuli.
UNtuli useke wahlonishwa ibhange Ithala ngendondo yokuba usomabhizinisi ovelele ngenxa yokuzikhandla kwakhe. Akugcinanga lapho kodwa Ithala liphinde lamlekelela ngokumsiza ngemali yokuqhuba ibhizinisi lakhe nokwenze laba yimpumelelo njengoba esekwazile nokuqasha intsha yendawo oKhukho eshayela amaloli akhe angama-51.